မိန်းမက မင်းကိုကြိုက်တာကို ဖုံးကွယ်ထားပုံ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 09/06/2022 10:00 | စုံတွဲနှင့်လိင်
မင်းကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေး ဖြစ်သွားပြီလား။ သူက မင်းကို ကြိုက်ပေမယ့် ဖုံးကွယ်ထားတယ်။? လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို တကယ်မသိပေမယ့်၊ အမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာများနှင့်အကြောင်းပြချက် လူတစ်ဦးသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ထူးထူးခြားခြား ပြုမူသည်ကို သင် ဖုံးကွယ်၍မရပါ။
အမျိုးသားတစ်ဦးကို စွဲဆောင်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးကို ဖုံးကွယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သော်လည်း သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည် အလွန်ပြင်းထန်ပါက၊ လေဖြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အထောက်အထားအားလုံး သို့မဟုတ် လက္ခဏာအနည်းငယ်ရှိလျှင်ပင် ထိုမိန်းကလေးက သင့်ကို သဘောကျသည် သို့မဟုတ် အဘယ်ကြောင့် သူမဘာမှမပြောသည်ကို သေချာအောင်မလုပ်နိုင်ပါက၊ တစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်။. သူမရဲ့ ဝါသနာကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
1 သူက မင်းကို သဘောကျကြောင်း ညွှန်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိတယ်။
2 အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ပထမခြေလှမ်းကို မဝံ့ရဲသည့် အကြောင်းရင်းများ
3 မိန်းမက မင်းကို သဘောကျတာကို ဘယ်လို ဖုံးကွယ်ထားလဲ။
သူက မင်းကို သဘောကျကြောင်း ညွှန်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိတယ်။
ဆဌမအာရုံ အဲဒါက ငါတို့ထဲမှာ အမြဲရှိနေနိုင်တယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။. ထိုအမျိုးသမီးသည် သိသာထင်ရှားစွာ ထုတ်ဖော်နိုင်သော အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါသလား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် ဖုံးကွယ်လိုသောကြောင့် သို့မဟုတ် သင့်တွင် ပံ့ပိုးရန် အကြောင်းပြချက်များရှိသောကြောင့် သက်သေပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ပထမခြေလှမ်းကို မဝံ့ရဲသည့် အကြောင်းရင်းများ
သံသယမရှိဘဲ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် အချက်ပြများသည် အလွန်ပုံဖျက်၍မရပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေက လုံးဝ မထူးဆန်းဘူးလို့ သင်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးအမွှားအချက်လေးတွေက သင့်ကို သူတကယ်နှစ်သက်ကြောင်း သိမြင်လာစေတယ်။. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားပါက ယောက်ျားကို နှစ်သက်ကြောင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်။
ရှက်ခြင်း ဒါဟာ အရှင်းဆုံး အကြောင်းပြချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဤအချက်သည် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာတွင် စိုးစံသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ မလုံခြုံမှုကို စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်ကို ရင်ဆိုင်ရန် သို့မဟုတ် နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် လုံလောက်သော ကိရိယာများ ချို့တဲ့ခြင်းသည် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်ထက်ပိုပါသည်။
ထိုမိန်းမသည် ရှက်ပုံမပေါ်သော်လည်း၊ မာနကြီးသူ၊ မာနထောင်လွှားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလတ်တိုင်းကို သူကြည့်ရှုသော်လည်း၊ ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုးကို ရင်ဆိုင်ရန် သူ့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံး မရှိနိုင်ပေ။
လူတွေက လုပ်ချင်ပေမယ့် မလုပ်နိုင်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ကတော့ သူတို့မှာ ရှိလို့ပါပဲ။ ငြင်းပယ်ခြင်းကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အရာရာကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ချင်သည့်အတွက် ဖိအားများစွာ ခံစားရသော်လည်း ရေရှည်တွင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၎င်းတို့အပေါ် လှည့်ကွက်များ သက်ရောက်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ် ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ခံစားချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် လုံလောက်သော လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်မရှိခြင်းနှင့်အတူ ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုလည်း ကစားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးသည် အထက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းအချို့ကို ထိမိ၍ လဲကျနိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်မရှိပါက အခြေအနေမှ ထွက်ပြေးသွားနိုင်သည်။
ယောက်ျားက မိန်းမကို ကြိုက်တာကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ။
ရဲရင့်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးက သူကြိုက်တဲ့ကောင်လေးကို ကြည့်လိမ့်မယ်။ အဝေးကို မကြည့်ဘူး။။ သို့သျောလညျး အဝေးကိုကြည့်သောအခါ၊ စိတ်မဝင်စားဘူး ဒါမှမဟုတ် ကွဲနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ၎င်းကို ဘေးဖယ်ထားရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပြီး ၎င်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ ရှက်ခြင်း။ မင်းကို လှည့်စားပြီးရင် သူက မင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒါက မင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ပဲ။
ထိုအမျိုးသမီးကို စိတ်ဝင်စားခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိရှိရန် လေ့လာနိုင်သော လက္ခဏာများစွာ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူမစိတ်ဝင်စားသော တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသော်လည်း၊ သူမသည် အမြဲတစေ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လုပ်နေသောကြောင့် သူမ၏အပြုအမူကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ၎င်းကို ဖုံးကွယ်ထားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ယခင်က ပြန်လည်သုံးသပ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း လက္ခဏာများကို အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်-
အပြုံး။ သူမသည် သင့်အပေါ် အမြဲတမ်း ချစ်စရာကောင်းသော အပြုံးတစ်ခုရှိနေပါက၊ ကွဲပြားသည်၊ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းသည်၊ ရိုင်းစိုင်းသော သို့မဟုတ် စိတ်အားထက်သန်နေပါက၊ သူမသည် သင့်အား စိတ်ဝင်စားကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ညွှန်ပြနေသည်။
သင့်ပုံရိပ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီအမျိုးသမီးကို အချိန်အကြာကြီး သိထားရင် သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံက ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ခံစားရနိုင်သလို အခုလည်း ပိုဝတ်လာတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ ဆံပင်ကို ပိုဂရုစိုက်ပြီး ရေမွှေးကောင်းကောင်းသုံးမယ်။
မကြာခဏ တူညီသောနေရာများ သို့မဟုတ် သင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် အမြဲနီးကပ်နေပါသည်။ အကြိမ်များစွာ ဖြစ်ပျက်လာသောအခါတွင် မတော်တဆမှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းမှာ သူမသည် သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကို စိတ်ဝင်စားပြီး ထိုတွေ့ဆုံမှုများကို အမြဲနှိုးဆော်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်စကားပြောပုံက သူ သင့်ကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကြင်နာမှုသည် အရေးကြီးသည်။ သူပြောသမျှကို အမြဲဂရုတစိုက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ။ အသေးစိတ်အချက်များစွာကို သူ မမေ့ခဲ့ပါ။ သင့်စကားဝိုင်းများတွင်
သင့်ခန္ဓာကိုယ် အချက်ပြမှုများကို စူးစမ်းပါ။. အဲဒါကို ထုတ်ဖော်မပြချင်ဘူးဆိုရင်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မျက်နှာက သင့်ကို အမြဲတမ်း ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သူမ စိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ပါ။ သင့်ဆံပင်ကို အဆက်မပြတ်ထိနေပါက သို့မဟုတ် သင့်အဝတ်အစားများကို ပြုပြင်ပေးမည်ဆိုပါက ဤလက္ခဏာများပင်ဖြစ်ပါသည်။
စကားပြောရင် သတိထားပါ။ သူသည် သင်၏မျက်စိကို စိုက်ကြည့်လျှင်၊ သို့မဟုတ် နှုတ်ခမ်းကဲ့သို့သော မျက်နှာ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ကြည့်ပါ။ ခြေဖဝါး အနည်းငယ် ခွာထားလျှင် ခြေချင်းဝတ်နှင့်ပင် ကိုက်နေတတ်သည်။
အရိပ်အယောင်များ၊ နိမိတ်လက္ခဏာများ၊ အထောက်အထားများ သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသော အရိပ်အယောင်များကြောင့် သင်သည် ထိုအမျိုးသမီးကို နှစ်သက်ပြီး မည်သူမျှ အစပြုခြင်းမရှိပါက၊ သင်သည် သေးငယ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုကို လှမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယုံမှားသံသယဖြစ်လျှင် သာ၍ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ သင့်ကိုယ်သင် မိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် ရက်ချိန်းယူရန် ကြိုးစားပါ။ အချိန်တွေများလွန်ပြီး သင်အများကြီးမစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်၊ ဒီအမျိုးသမီးမှာ ဖုံးကွယ်ထားစရာတစ်ခုခုရှိမရှိ သိဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ယဉ်ကျေးစွာကြိုးစားရပါမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » မိန်းမက မင်းကို သဘောကျတာကို ဘယ်လို ဖုံးကွယ်ထားလဲ။